နီးပါးတိုင်းမိန်းမနေ့စဉ်အလှကုန်, ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတော်ပင်။ ဒါပေမယ့်မျှတတဲ့လိင်မတိုင်းကိုယ်စားလှယ်ကဤရန်ပုံငွေများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အရေပြားပေါ်တွင်သက်ရောက်မှု, သူတို့ကပေးနိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားပေးပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်အလှကုန်များတွင် parabens အာရုံစိုက်။
အလှကုန်များတွင် Parabens မကြာသေးမီကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အမြတ်အစွန်းများလိုက်စားခြင်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၏သက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့အလိုဆန္ဒများတွင်ထုတ်လုပ်သူ parabens သုံးစွဲဖို့စတင်ခဲ့သည်။ Paraben အချိန်ကြာမြင့်စွာလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ antifungal နှင့်ပိုးသတ်ဆေးအရေးယူရှိပြီးဖြစ်သောအလွန်အမင်းဓါတ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကသိပ္ပံပညာရှင်များ parabens လူ့ခန္ဓာကိုယ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
parabens Shampoo &, လိမ်းဆေးနှင့်အခြားအလှကုန်အတွက်အလွန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏရှိသည့်အချက်ကိုနေသော်လည်းသူတို့ကလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုပြုံလေ့ရှိပါတယ်။ ဥရောပသိပ္ပံပညာရှင်များမျက်မြင်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးပါတဲ့ဒြပ်ထုရောက်ရှိဖို့, parabens ကင်ဆာဆဲလ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှပံ့ပိုးခြင်း, endocrine system ကိုထိခိုက်စေရန်စတင်နိုင်သည်ကိုတွေ့ပြီ။ ဤသည်တို့ကြောင့်အလှကုန်များတွင် parabens ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်း estrogen များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့တူအောင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအလှကုန်များတွင် parabens ၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အများစုမှာထုတ်လုပ်သူကဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသာမှန်းဆဖြစ်ပြီး, တူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်လွှတ်ပေးရန်ဆက်လက်ယုံကြည်ပါတယ်။
အန္တရာယ် parabens လည်း, ဤတ္ထုများမကြာခဏညျလူသားတို့အတွက်ပြင်းထန်မတည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်ဥရောပသိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့အဖွင့်လူသိရှင်ကြားထားပြီးပြီးနောက်, များစွာသောစားသုံးသူ parabens ်အလှကုန်သတိထားဖြစ်လာ, အချို့နှင့်လုံးဝအသုံးပြုစဲပါပြီ။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကစိုးရိမ်ထိတ်လန်ဖို့မများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုအပြင်မှာရှိတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မအကြံပြုသည်။ သို့သော် parabens မပါဘဲ Shampoo &, လိမ်းဆေးနှင့်အခြားအလှကုန်မှသွားချင်သောသူတို့က, ထုပ်ပိုးအပေါ်အထူးတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ clients များဆုံးရှုံးဖို့မရှိစေရေးအတွက်တချို့ကထုတ်လုပ်သူ, parabens ဆံ့မအထူးအလှကုန်စီးရီး, ထုတ်ပြန်။ "parabens မရှိရင်" သင်တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှာစတစ်ကာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
sulfate နှင့် parabens မပါဘဲအဲဒီမှာဆံပင်စောင့်ရှောက်မှု Shampoo & ၏ယနေ့ဖွင့်ဈေးကွက်ထဲမှာ။ sulfate - ထိုခေါင်းလျှော်ရည် lather အတွက်ဖွဲ့စည်းပေးသောတ္ထုများဖြစ်ကြသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သူတို့ရဲ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုသေးသိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ, ဒါပေမယ့်ဥရောပသိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများထိခိုက်မှု parabens ထက်ဆာလဖိတ်၏သက်ရောက်မှုလျော့နည်း pernicious မအခိုင်အမာ။
အပြည့်အဝကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ် parabens ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ထုတ်ပါကလိမ်းဆေးနှင့် Shampoo & ၏ဖွဲ့စည်းမှုသာအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာအစ parabens မပါဘဲသွားတိုက်ဆေးနှင့် deodorant ဆည်းပူးသင့်ပါတယ်။ parabens မပါဘဲသွားတိုက်ဆေးပြည်တွင်းနှင့်ဥရောပထုတ်လုပ်သူတှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့် parabens ကွဲပြားခြားနားသောသွားတိုက်ဆေး Weleda ၏မရှိခြင်း။
"အန္တရာယ် parabens လျှင်နှင့်၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုနည်းလမ်းများဝယ်ဖို့ရှိမရှိ?" - ကိုယ်တော်တိုင်ကဤတ္ထုများပေါ်မှာရှိသမျှရှိနိုင်ပါအချက်အလက်တွေနဲ့ Pre-ခင်မင်သိကျွမ်းဤမေးခွန်းကိုဖြေရန်အဘို့အလူတိုင်းအတွက်ရှိပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ကလုံးဝအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသိသင့်သာမှန်ကန်စွာတစ်ခုတည်းကိုသာဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အခြားသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ်အခြေခံပြီး, ရိုးရာကုစားရွေးချယ်ထားသည်။
မျက်နှာကိုအဘို့အ bronzer လျှောက်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေး - တစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အိမ်လုပ်ချက်ပြုတ်နည်းများ
အဆိုပါတရားခံအမျက်ဒေါသဇနီးဟောင်း - ဂယ်ရီ Oldman က "အော်စကာ" အတွက်ပြိုင်ပွဲထဲက drop နိုင်!
နှစ်သစ်ကူးနောက်ပြီး 2018 - နောက်ပြီးနှစ်သစ်ကူးအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များ 28 ဓါတ်ပုံ
မွေးကင်းစအတွက် colic ၏နည်းလမ်
အဆိုပါရုပ်ရှင်အန္တရာယ်အတွက် Freddie မာကျူရီ၏ဘဝအသက်တာအကြောင်း
တတာ chak-chak - စာရွက်